Mayelana NATHI - Shandong Landian Biological Technology Co., Ltd.
Shandong LanDian Biological Technology Co., LTD. itholakala epaki yezimboni zobuchwepheshe obuphezulu e-shouguang, esifundazweni saseShandong, esisogwini oluseningizimu ye-bohai laizhou Bay futhi "yidolobha lokudoba, usawoti nemifino". Le nkampani iwukuphela kwamabhizinisi obuchwepheshe obuphakeme abathenga ubuchwepheshe obunelungelo lobunikazi besikhungo samaShayina sesayensi ukukhiqiza i-bio-based succinic acid ngokuvutshelwa kwezinto eziphilayo nokukhiqiza ipulasitiki elenziwe nge-bio-based le-PBS lisebenzisa i-acid ye-succinic njengempahla eluhlaza.
Le nkampani ihlanganisa indawo eyi-1500 mu futhi inani lokuklanywa kwephrojekthi ngamathani ayi-500,000 / ngonyaka we-bio-based succinic acid kanye namathani ayi-200,000 / ngonyaka wepulasitiki we-PBS osuselwa ku-bio, ngokutshalwa kwemali okuphelele kwe-5 billion yuan nokwakhiwa ngezigaba ezintathu. Isigaba sokuqala sitshale imali engu-1 billion yuan kanti isikali sokwakha singamathani ayi-120,000 / ngonyaka we-bio-based succinic acid kanye namathani ayi-50,000 / ngonyaka wemikhiqizo esekwe nge-bio ye-PBS. Umugqa wokuqala wokukhiqiza wamathani ayi-60,000 / wesigaba sokuqala uqediwe wafakwa ekukhiqizeni ngoSepthemba 2017. I-bio-based succinic acid inekhwalithi enhle kakhulu futhi yaziwa kabanzi ngabasebenzisi.
Le nkampani inamandla kwezobuchwepheshe bezocwaningo nentuthuko kanti nemikhiqizo yayo ibhalwe ohlwini lwephrojekthi kazwelonke engu- "863". Kuyinto workstation academician futhi workstation postdoctoral we Chinese Academy of Sciences, futhi ibhizinisi ehamba phambili Weifang bio-based base impahla entsha ezingeni likazwelonke. Ngokubambisana neyunivesithi yaseTsinghua, isikhungo sokucwaninga nge-biotechnology se-Chinese academy of science, inkampani isungule i-microbiology lab, i-molecular biology laboratory, i-PBS plastics eyonakalisayo kanye nemikhiqizo yabo eguquliwe yocwaningo nentuthuko. Yakha i-succinic acid yaseChina enkulu kunazo zonke kanye nemboni esekwe ku-PBS esekelwa embonini ngokusebenzisa ubuchwepheshe bokuvutshelwa kwezemvelo obuthuthuke kakhulu emhlabeni.
01 Izinzuzo zomkhiqizo
I-bio-based succinic acid nemikhiqizo esekwe kwi-bio esuselwa ku-bio, yonke imikhiqizo eyenziwe ngendlela yokuvutshelwa kwezinto eziphilayo, izoba ngumncintiswano onamandla wokufaka esikhundleni izinqubo zokukhiqiza ze-petrochemical ngokuzayo; i-bio-based 1,4 butanediol yehlukile kwimikhiqizo ekhiqizwa izindlela zamakhemikhali. Imikhiqizo esuselwa ku-bio, esebenzisa i-bio-based butanediol ingaveza i-PBAT esuselwa ku-bio neminye imikhiqizo, engakhuthaza ukukhuthazwa kwe-PBAT esekwe kubio ezimakethe zase-Europe naseMelika. Imikhiqizo yochungechunge lwe-PBS esekwe ku-bio inezinzuzo ezisobala kuzakhiwo zemishini nokusebenza okonakele, futhi impahla eluhlaza eyenziwe yi-bio-based succinic acid yenkampani yethu, ngakho okuqukethwe yi-bio-carbon kuhambisana ngokuphelele nezindinganiso zase-Europe nase-United States.
02 Inzuzo Yemakethe
Ukukhiqizwa kwe-succinic acid ngendlela yokuvutshelwa kwezinto eziphilayo akuthinteki ngentengo kaphethiloli, intengo yezinto zokusetshenziswa ihlala izinze isikhathi eside, futhi izindleko zokukhiqiza ziphansi kunezindlela zamakhemikhali. Njengamanje, izinto ezonakaliswayo i-PBS, i-PBST ne-PBSA zithinteka ngentengo ephezulu yemakethe ye-acid ye-succinic ekuqaleni, okuholela ezindlekweni eziphezulu zokukhiqiza nokuvimbela ukukhuthazwa nokusetshenziswa kochungechunge lwe-PBS. Njengoba i-bio-based based succinic acid ne-bio-based 1,4-butanediol ifakwa emakethe ngobuningi, nakanjani izothuthukisa ukusetshenziswa kwezinto ezakhiwe nge-bio-based biodegradable PBS chungechunge kanye ne-PBAT ezimakethe zasekhaya nakwamanye amazwe.
03 Izinzuzo Zobuchwepheshe
Ubuchwepheshe benkampani yethu yokuvutshelwa buxazulule isimo esivamile sama-asidi ahlukahlukene kanye nemikhiqizo ethile kwinqubo yokuvutshelwa ngocwaningo oluqhubekayo nentuthuko kanye nokwenza ngcono inqubo yokukhiqiza eminyakeni yamuva. Izindleko zokukhiqiza zemikhiqizo yehliswe ngokuqhubekayo futhi nekhwalithi yomkhiqizo ibilokhu ithuthukiswa ngokuqhubekayo.
04 Inzuzo yokuphatha
Le nkampani ineqembu eliphelele, elisebenza kahle, elisheshayo futhi elisha. Le nkampani inenzuzo ngokuphelele embonini ngokwamandla emishini yehardware. Ngabasebenzi abasezingeni eliphakeme, nefilosofi yebhizinisi yokuthuthuka ngezikhathi, inkampani yethu izoba nezinzuzo eziningi embonini. Isenzo.
Imboni Eluhlaza okwesibhakabhaka, Hola umkhuba emhlabeni
Ubuchwepheshe buyashintsha imvelo
Okuqondiswe ezimakethe, izimfuno ezintsha
Thuthukisa izwe, uzuze isintu
Ubuchwepheshe kuqala, ukukhiqizwa okuncikile
Isendlalelo ngongqimba, ikhwalithi kuqala
Yakha iphupho lakho, bhekana nomthwalo wakho wemfanelo
Qiniseka futhi ume ngokuqinile
Le nkampani isebenzisa ubuchwepheshe obusha bokuvutshelwa kobunzima begazi okuluhlaza okotshani, okungangcolisi umoya futhi okungeyona into enobuthi ezintweni zokusetshenziswa, inqubo yokukhiqiza iye kumikhiqizo eqediwe. Ngokuqiniswa kokuvikelwa kwemvelo kuzwelonke, kubalulekile ukukhulisa opulasitiki ababolayo balwa nokungcola kwabamhlophe. I-bio-based succinic acid ekhiqizwa yinkampani ukuphela kwento eluhlaza yokukhiqiza i-PBS epulasitiki ebolayo. Akunakubuyiselwa futhi kunethemba lebhodi.